”Belotti uma qalmo 100 milyan” – Miralem Pjanic – Gool FM
”Belotti uma qalmo 100 milyan” – Miralem Pjanic
Raage September 22, 2017
(Torino) 22 Sebt 2017 – Miralem Pjanic ayaa sheegay inuu Juve ku bartay muhiimadda ay leedahay in 1-0 lagu badiyo, isagoo dhanka kale sheegay inuu €100m “istaahilin” qannaaska Torino ee Andrea Belotti.
Kulanka Derby della Mole ayaa la ciyaarayaa berritoole oo Sabti ah saacaddu marka ay tahay 19.45 UK ama (18.45 GMT).
“Waxaan runtii jeclaan lahaa inuu deby-gu ku dhamaado 1-0, maxaa wacay waxaan Juve ku bartay inay tahay hab wanaagsan oo loo badiyo,” ayuu Pjanic u sheegay La Stampa.
“Xilli-ciyaareedku waa u wacan yahay (Belotti), balse €100m waa lacag aad u badan. Weliba waxaad fikiraysaa marka aad xusuusato in Cristiano Ronaldo oo qiimahaa oo kale lagu iibsadey uu dhaliyo 2 am 3 gool ciyaartiiba”. ayuu raaciyay Pajanic.
Neymar oo raali galiyay ciyaartoyda PSG kadib dhacdadii isaga iyo Cavani
Man United oo isha ku haysa Kieran Tierney (Dhowr kulan oo ay daawanaysay)